Ukuhlaziywa kweNcwadi: UMary Norton "Ababoleki
Ibali elinyanzelayo malunga nabantu abancinci
Ibali likaMary Norton malunga ne-Arriety, intombazana engama-intshi-6 ubude kunye nabanye abafana naye, yincwadi yezingane zakudala. Kwiminyaka engaphezu kwe-60, abafundi abazimeleyo phakathi kweminyaka eyi-8 no-12 bavuyiswe ngabaBhokisi.
Abboleki banabantu abancinci abahlala kwindawo ezifihliweyo, ezifana nezindonga ngaphakathi nangaphantsi, kumakhaya abantu. Babizwa ngokubaboleki kuba "baboleka" yonke into abayifunayo okanye abayifunayo kubantu abahlala khona.
Oku kuquka iimpahla zendlu, njengama-spools amatafula kunye neenaliti zezinto zokukhitshi, kunye nokutya.
Ngaba ngababoleki Abangempela?
Enye yezinto ezenza ukuba abaBhorensi bazijabulise kakhulu ukufunda ngokuvakalayo baze baxoxe ngeyesibini ukuya kubalimi beesine ndlela yenziwe ngayo ibali. Incwadi iqalisa ngengxoxo phakathi kwentombazana egama linguKate noNksk. May, isihlobo sakhe esisebekhulile. Xa uK Kate ekhononda ngokulahlekelwa yintambo yokukhwela, uNkosikazi kaMe ucebisa ukuba inokuthi ithathwe nguMboleki kwaye ibali laBawoleki libonakala. UNksk May utshela Kate yonke into ayayaziyo ngabaBhorensi. Ekupheleni kwebali likaMeyi kaMeyi, uKate noNksk May baxubushe ukuba ibali lababoleki liyinyaniso okanye cha. UNkosikazi kaMeyi unika izizathu zokuba kutheni inyaniso kwaye izizathu zokuba kungenjalo.
Abafundi mabazenzele isigqibo. Abanye abantwana bathanda ukuxubusha malunga nokuba kutheni kufuneka kubekho ababoleki xa abanye bebathanda ukwabelana ngezizathu ezingenakho.
Ababoleki bayesaba ukufunyanwa ngabantu kwaye ubomi babo buzaliswe umdlalo, isenzo kunye nokuzonwabisa. Kukho nkxalabo njengoko befuna ukunika indlu yabo encinane phantsi komgangatho kwaye banokufumana ukutya okwaneleyo kwintsapho yabo ngelixa bephepha abantu kunye nezinye iingozi, njengekati. Nangona u-Arietty, unina, u-Homily kunye noyise, i-Pod, bahlala endlwini, i-Arrietty ayivunyelwe ukushiya ikhaya labo kwaye lihlolisise indlu ngenxa yengozi.
Nangona kunjalo, ukufika kukhwankqisayo kwaye kunelisekile kwaye ekugqibeleni kunako, ngoncedo lonina, ukukholisa uyise ukuba amthathe naye xa ehamba eboleka. Nangona uyise echaphazelekayo kuba kukho ingozi eyongeziweyo kunye nenkwenkwe ehlala endlwini, uyithatha. Ngaphandle kolwazi lwabazali bakhe, Ukufika kudibana nomfana kwaye uqala ukutyelela naye rhoqo.
Xa abazali be-Arrietty bafumanisa ukuba inkwenkwe yambonile, ikulungele ukuthatha inyathelo elikhulu. Nangona kunjalo, xa inkwenkwe inika ababoleki zonke iintlobo zefenitshala emihle kwi-dollhouse endala, kubonakala ngathi konke kuya kulungile. Emva koko, inhlekelele ibetha. Ababoleki bayabaleka, kwaye le nkwenkwe ayisayi kubona kwakhona.
Nangona kunjalo, uNksk May uthi akuyikuphela kwebali ngenxa yezinye izinto azifumene xa ehambele indlu ngomnyaka ozayo owabonakala eqinisekisa ibali lomntakwabo waza wamnika ingcamango yento eyenzekayo kwi-Arriety kunye nabazali bakhe emva kokushiya .
Ibali linemixholo eminingi kunye neendlela zokuhamba, kuquka:
Ubandlululo: Ubandlululo luhlala luqhubeka rhoqo kule ncwadi. Ababoleki abayithandi abantu, kwaye bacinga ukuba yinkwenkwe.
Iklasi: Kukhona imiba yentlalo emsebenzini. Kukho inkqubo yeklasi kwihlabathi lababoleki, apho indawo ohlala kuyo ikhetha isimo sakho.
Ukunyuka: Ababoleki 'ibali elikhulu lokuzalwa. Uhlobo lufunda ukuba abazali bakhe banokungahambi kakuhle, kwaye uqhubela phambili kwibali njengoko ekhula.
Xoxa ngalezi ngqikithi nomntwana wakho ukumnceda ukuba aqonde imiba eyahlukileyo ukuba ingafanele njani kubomi babantwana namhlanje.
Ababoleki bangabangela ukuvelisa abantwana. Ngezantsi ziingcamango kwimisebenzi abantwana bakho abanokuyenza:
Yakha izinto eziwusizo: Nika abantwana bakho ngezinto ezithile zasekhaya njengebhokisi, ibhola yekotoni, okanye ipensela. Buza abantwana bakho bacinge ngeendlela ababolekayo abangasebenzisa ezi zinto. Ngokomzekelo, mhlawumbi ibhola yekotoni ingaba ngumatilasi! Khuthaza abantwana bakho ukuba badibanise izinto ukudala zonke izinto ezintsha, ezinobuncedo.
Ukutyelela iminyuziyamu encinci: Unokuthatha inzala yomntwana wakho kwincwadi kunye nazo zonke izinto ezincinane ngaphandle kokuvakashela umboniso omncinci okanye umboniso wododo. Unokumangalisa kuzo zonke izinto ezincinane kunye nezinto kwaye ucinge ngendlela uMboleki ohlala kuyo.
Umbhali uMary Norton
Umbhali waseBrithani uMary Norton, owazalelwa eLondon ngo-1903, wayenencwadi yakhe yokuqala eyapapashwa ngo-1943 . Ababoleki , yokuqala yeencwadi ezintlanu malunga nabantu abancinci, bapapashwa eNgilandi ngo-1952 apho kwakuhlonishwa khona uMbutho weThala leNcwadi yaseCarnegie Imbali yeencwadi ezingabonakaliyo zabantwana. Yapapashwa okokuqala eUnited States ngo-1953 apho iphumelele kwakhona i-accolades kwaye yahlonishwa njengencwadi ye-ALA evelelekileyo. Ezinye iincwadi malunga nababolekayo ngabaBhorensi kwindawo , ababolekiyo , ababoleki kunye nababoleki .
Owaziwayo uBenedict Arnold nguSteve Sheinkin
Ukuhlaziywa kweNcwadi: 'Idayari yeWimpy Kid: Izintlu zeentsuku'
"Indlela endikufunde ngayo ukuqhuba" Isishwankathelo
"Umkhosi" ngu Stephenie Meyer - Ukuhlaziywa kwencwadi
Konke malunga "Idayari ye-Wimpy Kid: i-Rodrick Imithetho"
'Pete the Cat kunye neBane Groovy Buttons:' I-Children's Picture Book
Ukudweba Izifundo: I-Easter Bunny
Izinto ezi-5 i-Sat ayikwazi ukulinganisa okanye ukuqikelela
Indlela I-Federal Title I Inkqubo eyenza Abafundi neZikolo
Indlela Yokuthetha Ukufundisa ngesiFrentshi
I-5 Eninzi Imimandla eMntla yaseMntla yaseMelika yaseMntla
Indlela yokubala i-Atomic Mass
10 Amazwi Ngama-Reptile